Kufamba & Kushanya - Nyore Multi Ratidza - Dhijitari Signage Software
Ruzivo Centres, Tourism nzvimbo, Mahotera, Zviitiko Centers & Zvimwe
RODZA ZVAKO ZVESANGANO
Kunyangwe iwe uchimhanyisa hotera, ushanyi pakati kana iwe unoronga zviitiko zvikuru nezviuru zvevanhu, Easy Multi Ratidza inokubatsira iwe kugamuchira vashanyi vako nyore. Kunyangwe iwe uchida kuratidza kukwazisa kwakatambirwa, kana ruzivo rwechiitiko chevaenzi, unogona kuzviita neEMD.
Mushure mekugamuchira vaenzi vako, iwe unogona kugovera ruzivo rwakakosha nezve chiitiko, senge mashejheni, mirayiridzo uye mamwe masevhisi pane ekupihwa.
PaUNICEF tinoshandisa Easy Multi Display mukamuri redu rekutandarira kuratidza zviito zvedu kubatsira vana pasirese. Ichi chi
mukana wedu kuratidza kuzvipira kwedu munzira ine simba, tichishandisa manzwiro.
Sezvo sezita rinoratidza, EMD iri nyore kushandisa. Ini hapana chandinoziva nezvemakomputa. NeEMD isu tine chaiwo akaenzana dijitigine signage mhinduro yehofisi yedu yemazino.